भोटेकोशीको दुगुनागढीमा होमस्टे सञ्चालन, बढदै पर्यटक - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ पर्यटन ∕ भोटेकोशीको दुगुनागढीमा होमस्टे सञ्चालन, बढदै पर्यटक
भोटेकोशीको दुगुनागढीमा होमस्टे सञ्चालन, बढदै पर्यटक
Sindhu Khabar मंगलबार, २०७८ पुस २० / १८:२७
भोटेकोशी – सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख पर्यटकीयस्थल भैरवकुण्ड पदमार्गमा होमस्टेको सुरुआत गरिएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिका–३ स्थित यार्मासिङमा पर्यटन प्रवद्र्धनलक्षित होमस्टेको सुरुआत गरिएको हो।
भैरवकुण्ड, दुगुनागढीलगायत पर्यटकीय स्थलमा घुम्न आउने पर्यटकको सुविधाका लागि स्थानीय आमा समूहले होमस्टे प्रवद्र्धन गरेका हुन्।
यहाँ भूईंचालोअघि पनि यस्तो सेवा उपलब्ध थियो । भूईंचालोले घरहरु भत्काएपछि होृमस्टे सेवा टुटेको हो । पर्यटकीय गाउँ छगाम, बगाम, लिस्तीमाई मन्दिरसमेत यही बाटो हुँदै जाने भएकाले फेरि होमस्टेको सुरुआत गरिएको आमा समूहकी अध्यक्ष पासाङबुटी शेपाले बताइन्।
हाल प्रवद्र्धन गरिएको होमस्टे ऐतिहासिक दुगुनागढी नजिकै पर्दछ । भूईंचालोपछि दुगुनागढीको पुनर्निर्माण सकिएकाले यहाँ आउने पर्यटकहरु बढेका छन्। यहाँ गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रलेसमेत होमस्टे सञ्चालनका लागि पहलकदमी लिएको थियो ।
यार्मासिङ गाउँमा करिब २० घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ । हरेक घरमा दुई वटा कोठा पाहुनाका लागि छुट्टाइएको छ। यहाँ आउने पर्यटकका लागि होमस्टे सञ्चालकले अतिथि सत्कार, जलपान, खानपिनको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । पाहुनालाई स्थानीय शेर्पा संस्कृति झल्कने नाचगानसमेत देखाइने गरिएको छ ।
नजिकै पर्ने दुगुनागढी पर्यटकको प्रमुख गन्तब्यस्थल हो । देशभरका ऐतिहासिक १० गढीमध्येको भित्र यो गढीलाई मानिन्छ । अग्लो स्थानमा समथर भूभाग र रमणीय डाँडामा रहेका बिशाल चट्टानलाई कलात्मकता दिई पहराको खोचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले तीब्बतसँग युद्ध लडेको किवंदन्ती छ । कडा चट्टानलाई आड लिएर नेपाली पक्षले यही गढीबाट तीब्वततिर प्रहार गरेको शिलालेखसमेत छ ।
करिब ४२ सय वर्गमिटरमा फैलिएको गढीमा सिडिएमए टावर देखि विभिन्न हाउसवायर समेत जडान गरिएको छ । भोटेकोशी गाउपालिका ३ मा रहेको करिब एक सय ६० वर्ष परानो पुरातात्विक दुगुनागढी पुनर्निर्माण ध्वस्त भएको ५० महिनापछि पुनर्निर्माण थालिएको हो ।
वि. स. १९१२ मा तीब्बत र नेपाल बीच भएको युद्धमा नेपाल पक्षले यही गढीलाई आधारक्षेत्र बनाएर लडाईं लडेका थिए। त्यसताका नेपाली पक्षको सुरक्षार्थ तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले अग्लो स्थान रोजेर लडाईंका लागि सहज बनाउन गढीको निर्माण गरेका थिए ।
पछिल्लोसमय यहाँ आउने पर्यटकको संख्या बढेपनि दुगुनागढीसम्म पुग्न केही समस्याहरु अझै छन् । भिरालो भूबनोट भएकाले सडक स्तरोन्नति आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाई छ।सडक सञ्जालले दुगुनागढी जोडिएपनि सडक जिर्ण छ । सडक मर्मत गर्नसके अझै पर्यटक बढ्ने विश्वास स्थानीयको छ।